10 ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်များ
အလယ်ခေတ်ရဲတိုက်များ, စပျစ်ဥယျာဉ်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများ, အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အတွက်ဥရောပကိုစုံလင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသောအရာအနည်းငယ်သာရှိသည်. ဥရောပမြို့တိုင်းတွင်ကျက်သရေရှိသည်, ဒါပေမယ့်ငါတို့၏ ဦး တည်ရာ 10 ဥရောပရဲ့စာရင်းထဲတွင်အကောင်းဆုံးကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်အများဆုံးအနည်းငယ်ရှိပါတယ် လှပသောသောနေရာများ.
သစ်ပင်များနှင့်တောင်ကုန်းများကိုလိမ္မော်ရောင်ဖြင့်ခြယ်သသည့်အချိန်တွင်ဥရောပသည်အထူးသဖြင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်, မီးနီနီ, နှင့်အဝါရောင်. အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်, လမ်းများပေါ်တွင်လူ ဦး ရေနည်းပါးလာသည်, ဆိုလိုတာကသင်ဟာလှပတဲ့ကျဆုံးခြင်းအမြင်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်. ကျဆုံးခြင်းသည်ခရီးသွားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားစျေးနှုန်းများသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းရှိအံ့သြဖွယ်ရာအစက်အပြောက်များကိုရထားဖြင့်သွားရန်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေသည်. ပြင်သစ်ရှိ Loire ချိုင့်မှလူဇင်ဘတ်သို့, ရထားခရီးသွားခြင်းသည်သင်ချိန်းတွေ့ခဲ့သောဥရောပ၌အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးကျဆုံးအားလပ်ရက်ကိုစီစဉ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
1. Umbria တွင်အားလပ်ရက်များကျပါ, အီတလီ
လူအများစုက Tuscany ကိုဥရောပ၌အားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်ပိုနှစ်သက်ကြသည်, အီတလီရှိ Umbria ဒေသသည် ပိုမို၍ အထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးဥရောပနှင့်အီတလီတို့တွင်ကျဆုံးသောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ရထားဖြင့်အလွယ်တကူရနိုင်သည် ရောမမြို့ကနေ, Umbria သည်လူအများစုနည်းပါးပြီးအီတလီတွင်နေထိုင်ရန်စျေးနှုန်းချိုသာသည်. စက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအောက်တိုဘာလမှ, you can enjoy the white truffle and new wine festival in towns like Gubbio. လည်း, သင်သည်နှစ်စဉ် Eurochocolate ပွဲတော်အတွက်ပီရူးနိုင်ငံသို့သွားနိုင်သည်. ဒါကြောင့်, Umbria သည်အလွန်လှပသောရှုခင်းများတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟန်ဆောင်ရန်ကြိုးစားနေသည်, ဥရောပ၌သင်၏အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်တွင်အကောင်းဆုံးအစားအစာနှင့်ဝိုင်ကိုခံစားသည်. ခရီးတို၊, သင်သည်ရင်ခုန်စရာပို့စကတ်ကဲ့သို့သောနေရာတွင်နေထိုင်သည်, ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးကျဆုံးအားလပ်ရက်နေရာများထဲကတစ်ခု.
Florence to Orvieto လက်မှတ်တွေ
Siena မှ Orvieto လက်မှတ်တွေ
အော်ဗီဇိုသို့ Orvieto လက်မှတ်များ
Perugia to Orvieto လက်မှတ်တွေ
2. Cinque Terre, အီတလီ
အွန်လိုင်းဓာတ်ပုံများနှင့်အတူတရားမျှတမှုမလုပ်ကြပါဘူး မှော် Cinque Terre အီတလီမှာရှိတဲ့ဒေသ. တောင်ထိပ်၏ရောင်စုံအိမ်များ, စပျစ်ဥယျာဉ်များကဝိုင်းရံ, ဒေသခံစားသောက်ဆိုင်များ, နှင့် တောင်တက်လမ်းကြောင်း, အားလုံးသည်ဤဒေသကိုဥရောပ၌အံ့သြဖွယ်ကျဆုံးသောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်. Cinque Terre အမှန်တကယ်ပါဝင်သည် 8 သေးငယ်တဲ့ရွာ ထို့အပြင်ရထားလမ်းတစ်ခုလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်သွယ်ပေးသည်. ၎င်းသည်ကျေးရွာများသို့လည်ပတ်ရန်အထူးလွယ်ကူစေသည် 2-3 သငျသညျအချိန်တိုတောင်းလျှင်ရက်ပေါင်း. ကျဆုံးခြင်းသည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုတွင်ရထားပြေးလမ်းပေါ်မှခုန်ဆင်းခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာဖြစ်နိုင်သည်?
Cinque Terre သည်များသောအားဖြင့်ကမ်းခြေနှင့်ယူရေနီယမ်အတွက်ပူသောနွေရာသီသို့ရောက်သည်. သို့သျောလညျး, ကကျဆုံးခြင်းသွားရောက်ရန်အများကြီးပိုကောင်းသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းတွေဟာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေနဲ့အတော်လေးအလွတ်ဖြစ်နေတယ်. ထိုကွောငျ့, အများဆုံးစားသောက်ဆိုင်ပိတ်ထားနေစဉ်, သငျသညျပင်လယ်ကိုအပေါ်စီးပွင့်လင်းဘားကိုရှာဖွေနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်မြင်ကွင်းများကိုလေးစားနိုင်ဘူး.
သင်သုံးနိုင်သည်4ကျေးရွာများကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီး La Spezia မြို့တွင်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာအောင်နေထိုင်ကြသည်, Cinque Terre ၌ရထားစီးရန်စတင်ခြင်း. La Spezia မှ, သင်ရွေးချယ်သောအခြားမည်သည့်ရွာကိုမဆိုသင်သွားလေ့ကျင့်ပေးသည်.
La Spezia to Manarola လက်မှတ်တွေ
Manarola မှ Riomaggiore လက်မှတ်များ
Manarola လက်မှတ်များ Sarzana
Levar မှ Manarola လက်မှတ်များ
3. Lugano ရေကန်, ဆွစ်ဇာလန်
sparkling စိမ်းရေ, လှေကားထစ်အိမ်များ, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ Lugano ရေကန်သည်ဥရောပ၌ကျဆုံးသောခရီးဆုံးနေရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဆွစ်ဇာလန်ဥရောပအတွက်မမေ့နိုင်သောကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်များအတွက်အများအပြားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သောနေရာများရှိပြီး Lugano ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့သရဖူရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်.
အောက်တိုဘာလလယ်ပိုင်းတွင်အပူချိန်မှာနွေးနေဆဲဖြစ်သည်, ရိုးရာဆောင်း ဦး ရာသီတွင် polenta စွပ်ပြုတ်ကိုမြည်းစမ်းကြည့်နိုင်သည်. အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ဥရောပအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်၌စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်စွန့်စားမှုအနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းလိုလျှင်စိတ်ဝင်စားပါ, you can hike up Monte Bre. အထွတ်အထိပ်မှမြင်ကွင်းများမှာ Lugano ပင်လယ်အော်၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများဖြစ်သည်.
Lugano မြို့ဟောင်းတွင်ရောင်စုံမြို့တွင်းအိမ်များရှိသည်, 10 ရင်ပြင်များ, နှင့်ဇိမ်ခံစျေးဝယ်လမ်း Via Nessa. အဓိကအချက်, Lugano ရေကန်သည်သဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးလှပသောဘဝကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်ခရီးသွားများအတွက်နှစ်လိုသည်. Lugano ရေကန်သည်တနင်္ဂနွေနေ့သို့မဟုတ်ဥရောပတွင်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်.
မီဂန်အလယ်ပိုင်းမှတစ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းရထားဖြင့် Lugano ရေကန်သို့အလွယ်တကူသွားနိုင်သည်. ရထားတွေဟာနာရီတိုင်းမီလန်ရထားဘူတာကနေထွက်ခွာကြတယ်.
Lucerne မှ Zurich လက်မှတ်များ
4. Hannover ခုနှစ်တွင်အားလပ်ရက်ကျကြ, ဂျာမနီ
ဟန်နိုဗာသည်ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အနိမ့်ဆုံးမြို့ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ဥရောပမှာကျဆုံးတဲ့အားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခု. ဤမြို့ကြီးသည်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခု၏အိမ်ဖြစ်သည်, နယူးယောက်ရှိ Central Park ၏နှစ်ဆပိုသည်. Ancient oak trees andaလှပသောရေကန် ပန်းခြံမြေပေါ်တွင်ဖြစ်ကြသည်, ဆောင်း ဦး ရာသီ၌အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ပျင်းရိနေ့လည်ခင်းများအတွက်စံပြ.
Marktplatz မြို့ဟောင်းနှင့်နာရီမျှော်သည် Gothic ဗိသုကာပညာကိုရှာဖွေရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. သငျသညျအထင်ကြီး New Town Hall မှဆက်လက်နိုင်ပါတယ်, ရေကန်ကိုအပေါ်စီးကနေခမ်းနားသောနန်းတော်ပုံစံ. စိမ်းလန်းသောမြေများနှင့်သစ်ပင်များသည်နန်းတော်ကြီးကိုဝန်းရံထားပြီးရွှေရောင်အရောင်များနှင့်အတူလှပသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်မြင်ကွင်းကိုပြည့်စုံစေသည်.
Hannover ဂျာမနီရဲ့ကျောက်မျက်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကျဆုံးခြင်းအတွက်အလှအပမဖြစ်နိုင်ဘူး. သငျသညျဥရောပမှတစ် ဦး ကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဟန်နိုဗာသည်ခရီးသွားရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာမတွေ့ရသေးပါ, ဒါကြောင့်, မင်းမြို့ထဲမှာမင်းရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်.
5. Bavarian Alps နှင့်သစ်တော, ဂျာမနီ
အဆိုပါသစ်တောနှင့် Bavarian Bavarian Alps ဥရောပ၌ကျဆုံးသောမိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. ဂျာမနီရှိဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောဒေသသည်ဂျာမနီ၏အကောင်းဆုံးကျဆုံးခြင်းခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
သင်ကသာယာလှပတဲ့ရွာတစ်ရွာမှာရထားပေါ်ကဆင်းတဲ့အခါ, မင်းက Brothers Grimm ဇာတ်လမ်းကိုသွားပြီလို့ချက်ချင်းပဲခံစားမိလိမ့်မယ်. ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရေကန်များ, Triberg ရေတံခွန်များ, အစိမ်းရောင်ချိုင့်, နှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်များဥရောပ၌မမေ့နိုင်သောကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်အာမခံ.
အရွက်သည်အရောင်များကိုရွှေရောင်ပြောင်းသွားသည်, နောက်ခံ၌ဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်းနေသောတောင်များရှိနေစဉ်. အဲလ်ပ်တောင်တန်းများကိုအမြန်လမ်းလျှောက်ပြီးနောက်သစ်သားအိမ်တွင်အနားယူခြင်းသည်မမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်တို့သည်လည်းတ ဦး တည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် 25 ထိုဒေသရှိရဲတိုက်များနှင့် Neuschwanstein ရဲတိုက်သည်ဥရောပ၌သင်၏အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်ခရီးတွင်စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက်ထူးခြားသောရဲတိုက်ဖြစ်သည်.
Freiburg မှ Offenburg လက်မှတ်တွေ
Stuttgart မှ Freiburg လက်မှတ်များ
Leipzig မှ Freiburg လက်မှတ်တွေ
Nuremberg မှ Freiburg လက်မှတ်များ
6. အားလပ်ရက်အားလပ်ရက် Ahornboden တွင်ကျ, သြစတြီးယား
Rissbachtal ချိုင့်နှင့် Karwendel Alpine ပန်းခြံ, ဆောင်း ဦး ရာသီအပန်းဖြေခရီးထွက်ရန်အတွက်သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏ခမ်းနားထည်ဝါသောခရီးစဉ်ဖြစ်သည်. Ahornboden ၏ Alpine မြေပြင်အနေအထားရှိပါတယ် 2,000 နှစ်နှင့်ချီသော Sycamore-Maple သစ်ပင်များသည်သူတို့၏ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ရွှေရောင်နှင့်လိမ္မော်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားသည့်အတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလှသည်. သဘာဝနှင့်တောင်တန်းများသည်ဥရောပ၌အမှတ်ရဖွယ်ကျဆုံးသောခရီးသွားရာနေရာအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ရှုခင်းတစ်ခုဖန်တီးသည်.
Tyrol ရှိဤဒေသကိုအထူးသဖြင့်တောင်တက်သမားများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိလမ်းလျှောက်သူများအတွက်အထူးအကြံပြုသည်. အဆိုပါ အမျိုးသားဥယျာဉ် ဥရောပ၌မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်အပန်းဖြေရန်အတွက်ထုံးကျောက်တောင်များကြားတွင်တောင်များနှင့်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်.
Salzburg ရုံပါပဲ3ရထားဖြင့်နာရီအနည်းငယ်အကွာတွင် Ahornboden မှ, လွှဲပြောင်းအပါအ ၀ င်. ဖြည့်စွက်ကာ, Grosser Ahornboden တွင်ဟိုတယ်အပေးအယူကောင်းများနှင့်နေရာထိုင်ခင်းရွေးချယ်စရာများသည်ရာသီမကုန်ဆုံးမီတွင်ဖြစ်သည်.
7. Loire ချိုင့်၌အားလပ်ရက်ကျဆုံးခြင်း, ပြင်သစ်
T ကသူ Loire ချိုင့်သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ဝိုင်ဒေသတွင်တည်ရှိသည်. ဆိုလိုသည်မှာ 185,000 အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်စပျစ်ပင်စိုက်goldကများမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်. ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဥရောပသို့အလည်အပတ်သွားရောက်ရန်အလှဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျဆုံးသောအားလပ်ရက်ခရီးသွားရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
အများအပြားယူနေစဉ် ပဲရစ်မှတစ်ရက်ခရီး, လှပသောအလှတရားကိုအပြည့်အ ၀ တန်ဖိုးထားရန် Loire ချိုင့်၌သင်တနင်္ဂနွေနေရမည်ကိုအထူးအကြံပြုလိုသည်. ဒီလမ်း, ချိုင့်ဝှမ်းရှိအံ့သြဖွယ်ရဲတိုက်များထဲမှတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသို့သင်လည်ပတ်နိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သော Chateau က de Chambord အဖြစ်. အချို့ကဒီထူးခြားတဲ့ရဲတိုက်ကို De Vinci ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့တာလို့ပြောကြတယ်.
အဆိုပါ Chambord ရဲတိုက် ဖြစ်2hours south of Paris and you can train travel from Paris Austerlitz to Blois-Chambord. Within an hour andahalf, သင်သည်လှသောအဆင်းနှင့်ပြည့်စုံ။ ၊.
ပဲရစ်မှ Strasbourg လက်မှတ်တွေ
လူဇင်ဘတ်က Strasbourg လက်မှတ်တွေ
Strasbourg လက်မှတ်တွေ Nancy
8. ဘော်ဒိုး, ပြင်သစ်
ကျဆုံးခြင်းအတွက်ပြင်သစ်ထက်ပိုပြီးချစ်စရာကောင်းပြီးရင်ခုန်စရာဘာမှမရှိဘူး. ဘော်ဒိုးသည်ပြင်သစ်နိူင်ငံတစ်မြို့ဖြစ်ပြီး Saint-Emilion စပျစ်ဥယျာဉ်များနှင့် Arcachon ကမ်းခြေများနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်သည်။, ဤ2နေရာများသည် Bordeaux ရှိ Nouvelle Aquitaine ကိုချစ်မြတ်နိုးစေသည့်အကြောင်းအရင်းအချို့ဖြစ်သည်. နန်းတော်, ဝိုင်ခရီးစဉ်, spa ကုသမှု, နှင့်ချက်ပြုတ်သင်ခန်းစာများ, သင်၏အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အတွက် Bordeaux ကိုကောင်းမွန်သောခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်စေပါ.
အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အများစုသည်အိမ်သို့ပြန်လာကြသည်, ထို့ကြောင့် Bordeaux တွင်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းစျေးနှုန်းများကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်သည်. ဤအချိန်တွင်စပျစ်ဥယျာဉ်များသည်စပျစ်သီးများကိုရိတ်သိမ်းခြင်းဖြင့်စတင်သည်။. ဒါကဆက်ဆက်တစ် ဦး add ပါလိမ့်မယ် ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကို သင်၏အားလပ်ရက်ဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်သို့.
ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုရထားဖြင့်ရောက်ရှိရန်အလွန်ကောင်းသောဒေသဖြစ်သည်, နှင့်တိုက်ရိုက်ရှိပါတယ် မြန်နှုန်းမြင့်ရထား Paris-Austerlitz နှင့် Montparnasse ရထားဘူတာများမှဖြစ်သည်.
La Rochelle to Nantes လက်မှတ်တွေ
Toulouse to La Rochelle လက်မှတ်တွေ
La Rochelle မှ Bordeaux လက်မှတ်များ
La Rochelle လက်မှတ်တွေမှပဲရစ်
9. ပဲရစ်တွင်အားလပ်ရက်ကျဆုံးခြင်း, ပြင်သစ်
ဥရောပစာရင်းထဲတွင်အကောင်းဆုံးကျဆုံးသောအားလပ်ရက်သည်ပါရီမရှိလျှင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. ပဲရစ်အမြဲတမ်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာကျဆုံးခြင်းအတွက်အထူးသဖြင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. လူဇင်ဘတ်ဥယျာဉ်, သေးငယ်တဲ့ပြင်သစ်ကဖေး, နှင့် Live Street ဂီတသည်ဥရောပ၌မမေ့နိုင်သောအားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးသောဖန်တီးမှုဖြစ်သည်.
ချောကလက်ပူပြင်းစွာသောက်ပါသို့မဟုတ် Montmarte စပျစ်သီးရိတ်သိမ်းပွဲကိုကြည့်ပါ, ပါရီတွင်ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓါတ်ပုံများကိုရိုက်ယူရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာများရှိသည်. Photogenic အစက်အပြောက်များသည် Jardins du Luxembourg, Parc Monceau, နှင့် Tuileries ဥယျာဉ်. အောက်တိုဘာလကုန်မှစ, ဂီတ၏မြို့အနှံ့အမျိုးမျိုးသောနေရာများအတွက်နှစ်စဉ်ဆောင်း ဦး ရာသီပွဲတော်လည်းမရှိ, ကခုန်, နှင့်အနုပညာဖျော်ဖြေပွဲ. ဒါကြောင့်, ဒါကြောင့်မိုးရာသီသို့မဟုတ်နေသာရှိမရှိ, ပဲရစ်လုပ်စရာများစွာရှိသည်.
ပဲရစ်သည်လူ ဦး ရေနည်းပြီးခရီးသွားရာသီသည်ရာသီမကုန်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်ရထားနဲ့ခရီးသွားလာခြင်းကပဲရစ်ကိုဥရောပအားလပ်ရက်အတွက်အလွန်ကျဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်.
10. အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
နွေ ဦး ရာသီ၌, အဆိုပါ tulips အမ်စတာဒမ်ရဲ့ဥယျာဉ်များနှင့်ပန်းခြံများတန်ဆာဆင်, ဒါပေမယ့်ကျဆုံးခြင်း၌တည်၏, လိမ္မော်သီး, အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်သစ်ရွက်များသည်တူးမြောင်းများနှင့်လမ်းများကိုအရောင်ပြောင်းသည်. အမ်စတာဒမ်သည်အလှကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ဥရောပရှိကျဆုံးသောအားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်. မင်းသာအမ်စတာဒမ်ကိုဖြတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်3ရက်ပေါင်း, သင်တို့မူကားသာယာလှပသောရှုခင်းများကိုတန်ဖိုးထားရန်ပိုကြာကြာနေရန်နှင့်ထောင့်တိုင်းတွင်ရပ်တန့်လိုသည်.
အမ်စတာဒမ်သည်ဥရောပ၌အားလပ်ရက်ခရီးတစ်ခုအတွက်အံ့ဖွယ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, နှင့် 50 မြို့ပြတိုက်, လှေစီး တူးမြောင်းများတွင်, နယ်သာလန်၌ဤအံ့သြဖွယ်ကျဆုံးခရီးသွား ဦး တည်ရာကိုလုပ်ဖို့အံ့သြစရာအရာများစွာကိုရှိပါတယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, အံ့ park စရာပန်းခြံများရှိပါသည် ဘယ်မှာသင်ပျော်ပွဲစားရှိနိုင်ပါသည် ရာသီဥတုသာယာမယ်ဆိုရင်စက်ဘီးစီးပါ.
အမ်စတာဒမ်သည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှမည်သည့်နေရာမှမဆိုရထားဖြင့်သွားနိုင်သည်, နှင့်မြို့အတွင်းသွားလာရန်လွယ်ကူသည်.
ဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်, နှင့်ဂျာမနီသေးငယ်တဲ့လူဇင်ဘတ်တိုင်းပြည်ဝန်းရံ, ဥရောပ၌စုံလင်သောကျဆုံးခြင်းခရီးသွား ဦး တည်ရာ. လူဇင်ဘတ်မြို့သည်၎င်း၏မြို့ဟောင်းကိုကျော်ကြားသည်, ကမ်းပါးများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးအလယ်ခေတ်ခံတပ်ကဝိုင်းရံထားသည်. ၎င်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဗိသုကာနှင့်ရှေးဟောင်းကမ္ဘာကျော်ကျက်သရေကယင်း၏ခေါင်းစဉ်ရရှိခဲ့သည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အအမွေအနှစ် site ကို. Grand Ducal နန်းတော်နှင့်အဒေါ့ဖ်တံတားသည်သင်၏အားလပ်ရက်ခရီးတွင်လူဇင်ဘတ်သို့သွားရာနေရာများဖြစ်သည်.
ဥယျာဉ်များနှင့်ရှုထောင့်မြောက်မြားစွာသည်တစ်မြို့လုံးနှင့်၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်အပေါ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်. ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ရှုခင်းများသည်ဆောင်း ဦး ရာသီအရောင်များဖြင့်လှပသည်. ဒါကြောင့်, လူဇင်ဘတ်သည်ဥရောပ၌အသေးငယ်ဆုံးမြို့ဖြစ်သော်လည်း, ၎င်းသည်နာမည်ကြီးသည့် Paris ကဲ့သို့ကြီးမားသောမြို့ကြီးများ၏ဘေးတွင်ရှိသည်. ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ဥရောပ၌သင်၏အားလပ်ရက်အတွက်လူဇင်ဘတ်ကိုရွေးချယ်သင့်သည်မှာသေချာပါသည်.
အဆင့်မြင့်မီးရထားဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, သင်သည်အချိန်မရွေးဥရောပရှိမည်သည့်နေရာသို့မဆိုသွားနိုင်သည်. နာမည်ကြီးမြို့ကြီးမှသည်အလွန်သေးငယ်သော၊, ငါတို့ပေါ်မှာရှိသမျှသောမြို့ 10 ဥရောပ၌တစ် ဦး ကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ, has its unique charm and magic.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ငါတို့စာရင်းထဲရှိလှပသောနေရာများသို့အသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များကိုသင်ကူညီပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးကျဆုံးခြင်းအားလပ်ရက်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-fall-vacations-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)